Tahriibayaal ku dhintay Xeebaha Dalka Liibiya | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Tahriibayaal ku dhintay Xeebaha Dalka Liibiya
Liibiya(SONNA) Qul qulka tahriibayaasha ka socoda Qaaradda Africa ayaa weli ka taagan Badda Meditraniamka ee isku xirta Qaaradaha Africa iyo Yurub,halkaasi oo dhibaato xoogan ay kala kulmaan dadka tahriibta ah.
Wararkii ugu dambeeyeye ee tahriibka ayaa la sheegayaa in meydad badan oo ku geeridoodayu biyaah baddaaasi la heley,kadib markii ay la qalibmatay doonidiid ay wateen.
Warbaahinta caalamka ayaa baahisay in ilaa iyo haatan la la’yahay dad ka badan 100 qof oo la socday doontii qalibantay,taasi oo qaarkood ay ku dhinteen biyaha,gaar ahaan xeebaha Dalka Liibiya.
Sida uu baahiyay Tvga CNN ee laga leeyahay Mareykanka,Saraakiisha ilaalada xeebah Dalka Talyaaniga ayaa sheegaya in ay jiraan meydadka ku dhawaad 30 qof oo badda ku dhintay kuwaasi oo haween u badan,oo ay ku hayaan Dalkaasi.
Ilaa 400 oo tahriibayaal ah ayaa xeebaha dalka Liibiya waxaa ka soo bad baadiyay ciidamada ilaalada Xeebaha ee Midowga Yrub,waxaana jira tahriibayaal badan oo la aaminsanyahay in weli badda ay ku dhexjiraan
Inkastoo aanay jirin warbixin rasmi ah ee ku aadan dadka doonidaasi la socday ayaa hadana waxaa la hadal hayaa in dadka ugu badan ay ahaayeeen muwaadiniin u dhashey Dalka Nigeria, oo gaaraya 26 haween ah oo2kamid ah ay xaamilo ahaayeen.
Dadka ayaa saarnaa dooni Nuuca Balastikada ah,taasi oo siday dad gaaraya ilaa 150 qof oo muhaajiriin ah,waxaana muhaajiriinta qaar kood la mad baadiyay ay heleen ciidamda ilaalada xeebaha Midowga Yurub gaar ahaan markab laga lahaa Dalka Spain.
Previous articleWARBIXIN:-Maxaa sabab u ah qaraxyada ku soo laa laabtay Muqdisho
Next articleKismaayo oo ka furmay shirweyne loogu diyaar garoobayo tartanka ciyaaraah Gobolada”Sawirro”